KOPPU | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း KOPPU ဟောင်ကောင်-မကာအိုအနီးမှ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လိမ့်မည်
လာမည့် ၂၄ နာရီအတွင်း အပူပိုင်းမုန်တိုင်း KOPPU သည်တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကမ်းခြေကို Yangdong နှင့် Jiancheng အနောက်ဘက် မိုင် ၃ဝ ခန့် Yanxi-countrysite အနီးမှ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်စဉ် အဆင့်-၁ မုန်တိုင်း(တစ်နာရီလျှင် ၇၅ မိုင်မှ ၉၂ မိုင်နှုန်းဖြင့်) ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီး – ကုန်းတွင်းသို့ ရောက်ရှိပြီးသည့်အခါ မြေမျက်နှာပြင်အနေအထားကြောင့် ချက်ချင်း အားပျော့ကာ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိ၍ အားပျော့ပျက်ပျယ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဟောင်ကောင်နှင့်မကာအိုတို့သည် မုန်တိုင်းဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်သည့် လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ရှိနေပြီး ဝင်ရောက်တိုက်တိုက်ခတ်မှု ဖြစ်နိုင်ခြေရာနှုန်း ၁ဝဝ%ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းအတွက် အဝါရောင်အဆင့် သတိပေးချက်များထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
Posted in Weather News. Tags: KOPPU, tropical-storm, weather. LeaveaComment »
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း KOPPU update-2
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း KOPPU အတွက် အဝါရောင်သတိပေးချက်ကို TSR (Tropical Storm Risk) မှ ထုတ်ပြန်ကြေငြာလိုက်ပါသည်။
ကြေငြာချက် မူရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဟောင်ကောင် နှင့် မကာအို တို့ အတွက် နောက် ၁၂ ရီအတွင်း မုန်တိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နိုင်ခြေ အဆင့်-၁(CAT-1) ၂၅ % သေခြာမှုရှိပြီး၊ မုန်တိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နိုင်ခြေမှာ တရုတ်နိုင်ငံ-၁ဝဝ% ၊ ဟောင်ကောင် ၉၅% နှင့် မကာအို ၉၅% ဖြစ်ကြောင်းပါရှိပါသည်။
အဝါရောင်အဆင့်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်သည့် မြို့များမှာ ဟောင်ကောင်- ၈ဝ% ၊ Maoming ၇ဝ% ၊ Guangzhou ၆၅% နှင့် Zhanjiang ၆ဝ% တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
အဝါရောင်အဆင့်သတိပေးချက်နှင့် ပတ်သက်သည့် ရှင်းလင်းချက် –
CAT-1 အဆင့်မုန်တိုင်း ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နိုင်ခြေ ၁ဝ% မှ ၃ဝ% (သို့မဟုတ်) အပူပိုင်းမုန်တိုင်း (TS) အဆင့်တိုက်ခတ်ခြေ ၅ဝ% နှင့် အထက်
CAT-1 အဆင့် မုန်တိုင်းဆိုသည်မှာ လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီ ၇၄ မိုင်နှုန်း(၁၁၉ ကီလိုမီတာ)နှင့် အထက်(သို့မဟုတ်) လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီ ၆၄မိုင်နှုန်းဖြင့် တစ်မိနစ်ထက်ပိုကြာအောင်ဆက်တိုက်တိုက်ခတ်လျှင် CAT-1 အဆင့် မုန်တိုင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ပါသည်။
TS (Tropical Storm – အပူပိုင်းမုန်တိုင်း) ဆိုသည်မှာ လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီလျှင် ၃၉ မိုင်(၆၃ ကီလိုမီတာ) နှုန်း သို့မဟုတ် တစ်နာရီလျှင် ၃၄ မိုင်နှုန်းဖြင့် တစ်မိနစ်ထက်ပိုကြာအောင်တိုက်ခတ်လျှင် TS အဆင့် သတ်မှတ်ပါသည်။
မုန်တိုင်းအခြေအနေမှာ အဆင့်-၁ (CAT-1 )သို့ ရောက်လာနိုင်ကြောင်းခန့်မှန်းထားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
Original Warning Message from TSR
Tropical Storm KOPPU is forecast to strike land to the following likelihood(s) at the given lead time(s):
Posted in Weather News. Tags: KOPPU, tropical-storm, weather.2Comments »
တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း KOPPU ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိ
ဒီကနေ့ စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက် နံနက် ဝဝး၃ဝ နာရီမှာ တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း KOPPU စပြီးဖြစ်ပေါ်နေပြီး ဟောင်ကောင်ရဲ့ အရှေ့တောင်ဘက် ၁၄၅ ခန့်မှာ ဗဟိုပြုနေပါတယ်၊ KOPPU ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နာရီ JTWC ထုတ်ပြန်ချက်အရ အနောက်ဘက်ကို တစ်နာရီ ၁ဝ မိုင်နှုန်းနဲ့ ရွေ့လျားလျှက်ရှိပြီး၊ ဒီကနေ့မနက် ၆နာရီခွဲအချိန် တိုင်းထွာချက်အရ မုန်တိုင်းဒီရေလှိုင်းအမြင့် ၁၆ ပေအထိရှိနိုင်ကြောင်းလဲ ထုတ်ပြန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ မုန်တိုင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ update များကို ဆက်ပြီး တင်ပြသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
မုန်တိုင်းအခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်လို့ http://mmweather.com/live-response.html မှာ မေးမြန်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။